Kedu Ajụjụ Ndị Achọrọ Aza iji Nyochaa Atụmatụ Inbound nke Companylọ Ọrụ Gị? | Martech Zone
M na-arụ ọrụ na a atụmanya ugbu a na maara na ha na-achọ enyemaka na ha digital ọnụnọ na inbound ahịa mgbalị ... ma ha amaghị ebe-amalite ma ọ bụ ụzọ dị mkpa iji nweta ebe ha mkpa. Ezie na m na e dere ọtụtụ ihe banyere njem agile ahịa ịzụlite gị ahịa okè, m na ọ bụghị n'aka na m na mgbe e dere banyere ndị ọcha dị mkpa maka ihe ịga nke ọma.
Ka m na-arụ ọrụ na nke a ahịa, m na e ajụjụ ọnụ ha ahịa, ahịa, na-edu ndú otu ịghọta ihe banyere ha na atụmanya, ha ahịa okirikiri, na ndị ahịa na njem nke mere ndị engagements.
Akụkụ dee na a ... a imerime ndi ulo oru na m na-arụ ọrụ na-agwa m na azụmahịa mgbe emechi site n'okwu ọnụ, site mmekọrịta, ma ọ bụ na ụlọ ọrụ ihe. M chọrọ ịbụ doro anya na m na mgbe lee gị inbound ahịa mgbalị iji dochie ma ọ bụ nye a yiri ụzọ ndị mgbalị - na nke ahụ bụ n'ezie ahụkarị.
Tydị Marketingdị Ntanetị Inbound Inbound
Ebe a bụ a nkịtị dịruru ná njọ na m na-ahụ mgbe ọ na-abịa inbound ahịa:
A atụmanya na-ajụ ndị ọrụ ibe ha maka ngwaahịa ma ọ bụ ndị na-eweta ọrụ.
Nke a nwere ike ime site na mgbasa ozi mmekọrịta, email, ma ọ bụ site n'okwu ọnụ.
Mgbe ahụ, atụmanya na-aga na njin ọchụchọ iji chọọ ụlọ ọrụ gị. N'ebe ahụ ha na-ahụ ọnọdụ gị yana, ikekwe, ụfọdụ ọkwa.
The atụmanya ahụ na-aga na-elekọta mmadụ media na-ahụ na ị na-arụsi ọrụ ike na-anabata ndị ahịa mkpa. Ọbụna ha na-hụrụ ebe ị edozi a ahịa mkpesa omume ọma.
Mgbe ahụ, atụmanya na-aga na ebe nrụọrụ weebụ gị ebe ha na-enyocha ma ị nweghị ngwaahịa ha chọrọ ma ọ bụ na ị nwere nka ha chọrọ.
Ha na-eleba anya na saịtị gị maka ahụmịhe ụlọ ọrụ, akaebe, iji okwu eme ihe, yana - n'ikpeazụ - ụfọdụ ozi kọntaktị.
Ha na-akpọ ma dozie oge.
Companylọ ọrụ ahụ jụrụ etu olile anya ha siri nụ maka ha, ha wee sị na ọ bụ onye otu ha zigara ha.
Mgbe ị na-emechi atụmanya, ebe a bụ otú na ahịa njem anya amasị na akwụkwọ:
Rịba ama ihe ọ bụla na-efu? Ọfọn, e nwere bụ a ton efu - ma ị na-agaghị efu efu ya - n'ihi na ị na-amaghị mmetụta gị digital ọnụnọ nwere na ndị ahịa njem. Ị na-na-emeghị ihe ọ bụla iji na-tụọ mmetụta nke niile nke ọcha, otú gị na-edu ndú ohu inbound ahịa kpam kpam ... na dị nnọọ na-agwa gị na-aga akụ aka ọzọ ụzọ.
Kedu ihe Inbound Marketing dị irè?
Mgbe m na-screening a ụlọ ọrụ m chọrọ ime azụmahịa na, ma ọ bụ na m na-enyere a ụlọ ọrụ na ha ka mma inbound ahịa mgbalị, e nwere ụfọdụ dị nnọọ iche n'eluigwe na ụwa m na-akafiakde mgbe agwa ha ahịa na ahịa otu nke na-aghọta ha ahịa si njem. Na a elu larịị, ebe a bụ ihe m na-achọ na:
Ka saịtị wee rụọ ọrụ nke ọma maka inbound mgbalị, ụfọdụ dị mkpa dị mkpa:
Nchọgharị njikarịcha - Mgbe atụmanya na-enyocha akara gị, ngwaahịa gị, ma ọ bụ ọrụ gị n'ịntanetị - ha na-achọta gị?
Health Site - saịtị gị dị mma nke ọma, ọ bụ ezie na enwere ụfọdụ okwu na mkpado aha na meta nkọwa oyiri. Achọtara m 404 na otu mmewere. Enwere ike idozi ha niile n'ime awa na-enweghị nnukwu ọrụ ọ bụla.
Nchọpụta Akara - enwere ike ịchọta ụlọ ọrụ gị site na iji akara gị na saịtị, saịtị mmekọ, saịtị ụlọ ọrụ na maapụ?
content - a na-achọta gị na ịdebe isiokwu ndị na-eduga n'ezie ntinye aka nke na-eduga n'ịgbanwe?
Ahụmịhe Ndị Ahịa - Mgbe atụmanya na-enyocha gị n'ịntanetị, ị na-anabata ma soro ndị obodo gị?
Ntughari - Mgbe atụmanya anya gị ụlọ ọrụ aha online, na-na ha na-achọta reviews na Ibọrọ na-egosipụta nke ọma na gị ika?
Ịkekọrịta - Mgbe ndị ahịa gị na ndị mmekọ gị chọrọ ịkekọrịta ozi gị n'ịntanetị, ọ bụ ọdịnaya ahụ kachasị nke ọma? Ndi udori, nkọwa, ye ndise ẹwak etieti? Have nwere bọtịnụ nkekọrịta iji mee ka ọ dị mfe ịkekọrịta ozi dị oke mkpa?
Ijikọ - have nwere ọnụnọ mmadụ ebe ndị ahịa gị nwere ike iso ma soro gị na mgbasa ozi mmekọrịta? Ozi ahụ ọ bụ na ibe ọ bụla nke weebụsaịtị gị?
Mgbanwe - Enwere ndị ọkachamara n’ime ụlọ ọrụ gị nke agbasoro nke ọma? Ndi mmọ ẹdiọn̄ọ fi? You meela ọbịbịa ọ bụla n’ebe ha nọ?
Nhazi ngbanwe - Ọ dị mfe maka atụmanya ịchọta na ịrịọ enyemaka? Nke a nwere ike ịgụnye ma ụdị, bots, windo nkata, na njikọ nọmba ekwentị.
CRM mwekota - Mgbe a rịọrọ ozi ma ọ bụ lekwasịrị anya, ozi ahụ edekọ ma kesara ndị otu ahịa gị? Can nwere ike soro ndu site na isi mmalite (kwụ ọtọ, ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, email, mbipụta) site na ntụgharị?
Njide na Mgbanwe - Kedụ ka gị na ndị ahịa ugbu a na-ekwurịtakarị iji hụ na ha ghọtara uto gị na ike gị? You na-akụziri ndị ahịa gị ihe ma wulite uru dị ka onye ọlụlụ na mmeri ha? Have nwere amamọkwa ihe nchọgharị? Akwụkwọ Akụkọ Email? Drip mkpọsa? Ngwa ngwa ngwa ma ọ bụ ozi SMS?
Ọbá akwụkwọ Ọdịnaya - Ebe nrụọrụ gị ọ nwere ozi zuru oke nke atụmanya nwere ike ijere onwe ha ozi nyocha ha n'emeghị ka ị bụrụ onye òtù ọlụlụ? Bụ nke gị Ọbá akwụkwọ ọdịnaya mfe ịchọ? Ejikọtara ọdịnaya gị nke ọma ma mechie ya? Ihe odide gị ọ dị nfe ma budata? Have nwere akụrụngwa ọdịnaya gụnyere vidiyo, infographics, okwu ikpe, akwụkwọ ọcha, pọdkastị, yana edemede?
Ihe ngosi ntụkwasị obi - Kedu otu akara gị ga-esi tụkwasị obi na webụsaịtị gị?
N'ebe ahụ - Ndi saịtị gị nwere ihe ngosi (akaebe, asambodo, akụrụngwa, akara ahịa, iji okwu ikpe) iji nye atụmanya nke ntụkwasị obi na ị nwere ntụkwasị obi ma nwee ike ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ dịka ha?
Ọpụpụ - Ndi gị ụlọ ọrụ nwere a ọnụnọ na onye na saịtị, ọrụ na saịtị, na àgwà directories online? Ọ gị ụlọ ọrụ ndepụta na media outlets na metụtara njikọ na kwuru na ị na? Ndi gị ụlọ ọrụ nwere a mmekọrịta ọhaneze otu na-arụ ọrụ na-enweta na ị ọzọ nọchiri ihu?
Ezubere iche - ọ bụ ọrụ gị, ọrụ gị, nyiwe gị, na saịtị gị ka ị nwere ahụmahụ na-arụ ọrụ? A haziri nke ọma na igodo gị ka atụmanya wee nwee ike ịchọta ozi ha chọrọ?
Inbound Marketing anaghị akwụsị E
Ọ bụrụ na ị nwere niile na na ebe, na ihe ịtụnanya ... ma ọ dịghị akwụsị ebe ahụ! A isi nke na ọtụtụ ụlọ ọrụ bụ na ha na ọ bụghị ndị nwere mkpa Filiks na ebe nri inbound ahịa mgbalị. Fọdụ ajụjụ n’ebe ahụ:
Ọganiihu ndị ahịa - N'ime mkpara gị, onye bụ maka na-esonụ na a ahịa iji hụ na ha ịga nke ọma? Ndi oru ihe ịga nke ọma na ọdabara maka na-ekere òkè gị online Pọtụfoliyo? Emepe emepe a were ikpe? A ahịa testimonial? Nri gị ala na anyị na-ekesa na ndị ọzọ ahịa na atụmanya?
referrals - Ọ bụrụ n’inwe ihe ịga nke ọma n’ebe onye ahịa gị nọ, ị na-arịọ ha ka ha gbasaara gị ozi a? Ha nwere onye ọrụ ụlọ ọrụ na ngalaba ọzọ ma ọ bụ na ụlọ ọrụ ọzọ ha nwere ike iji aka ha kerịta ihe ịga nke ọma gị?
Nnyocha ndị e mere - you na - ewepụta data nyocha iji ghọta etu atụmanya ahụ si chọta gị, ihe kpatara ha ji họrọ gị, yana otu ị ga - esi meziwanye ikike maka atụmanya ọzọ maka ọrụ onwe gị ma jikọọ na gị maka ọrụ ọzọ ha ga - abịa.
Analytics - you na-eji usoro okpomoku, ọrụ onye ọrụ, mkpọsa, nsuso mmemme, na nyocha A / B iji bulie ọnụnọ dijitalụ gị ma mee ka ọ dị mfe maka atụmanya na-esote iso gị na ịntanetị?
Dashboards - you nwere dashboard dị mfe nke na-enyere ndị otu gị aka ịghọta ahụike zuru oke nke mbọ inbound ị na-agba n'ịntanetị yana otu ha nwere ike isi nye aka na ọganiihu ya?
Ị na-ewere ihe niile nke na ozi ma rụọ ọrụ mgbalị gị? Naa ... ka-esi na-arụ ọrụ!
Tags: Ọbá akwụkwọ ọdịnayanjem ndị ahịangalaba ahanyochainbound marketinginfluencermmekọrịta ọhanezeNtuziakajiri okwu